ွGUI OS တွေပေါ်လာတော့ CLI OS ကပျောက်ကွယ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်၊ ယေဘုယအားဖြင့် GUI OS တွေကအသုံးပြုရလွယ်သလိုရှိပါတယ် ဒါပေမည့် CLI ကပိုတောင်လွယ်ပါတယ် command ကိုရိုက် သူက အဖြေပြန်ထုတ်ပေး နောက်command တစ်ခုထပ်ရိုက် သူကအဖြေပြန်ထုတ်ပေး ဒီသံသရာထဲရောက်နေတော့ ကြာတော့သုံးရ စိတ်မရှည်တော့ဘူးပေါ၊့ ကြာရင် လိုဖြစ်သွားနိုင်တယ် စိတ်ရှည်ရမယ်နော်၊ Command ရေးရတာတွေကလဲ မှောင်မှောင်မဲမဲထဲဆိုတော့ ကြောက်ကလဲအကြောက်သား
အနက်ရောင်က မသိခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အတွက် (တစ်ချို့တွေးမြင်မိတတ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်) ခက်တယ် လို့လဲအများစုက ထင်ကြပါတယ် ဒါပေမည့်အရမ်းလွယ်ပါတယ် ကြိုးစားကြည့်ပါလို့၊ မလုပ်ကြည့်ဘဲနဲတော့ မနေနဲ့နော် (ကျွန်တော်နားလည်သလောက်ကိုပြောတာနော် ခက်တာလဲရှိမှာပါ )
Windows7တို့ Vista တို့သုံးရင်တော့ အဲဒီ window key (start key) ကိုဖိပြီးရင် " cmd " လို့ရိုက် ပြီး ပုံထဲကအတိုင်း Enter key ကိုဖိပေးပါ (" " တွေထည့်စရာမလိုဘူးနော်)
ဒါဆို ဟိုးအပေါ်က မဲမဲ command box လေးပေါ်လာပါမယ်
Windows XP မှာတော့ windows key ကိုဖိထားရင်းကနေ တပြိုင်တည်း "R" key ကိုနှိပ်ပေးပါ
ဒါဆို အောက်ကပုံအတိုင်း run box ပေါ်လာပါမယ်၊ ပုံထဲကအတိုင်းဘဲ " cmd "လို့ရိုက်ပြီး Enter key ဖိပေးပေါ့
cancel တို့ Browse တို့ကို mouse နဲ့နှိပ်ချင်လဲနှိပ်ကြည့်ပေါ့
ပုံထဲကအတိုင်း "Cursor "က ဖွင့်ချီ မှိတ်ချီ နဲ့ အမိန့်ပေးတာကို စောင့်နေပါလိမ်မယ်... စခိုင်းလို့ရပြီ ခိုင်းပါတော့ဗျို့ သဘောပေါ့
လေ့လာရင် ဘယ်လောက် ကြာမလဲ ? Gone in sixty seconds ဇာတ်ကား ထဲကလိုမျိုး fast and furious ဇာတ်ကား ထဲကလိုမျိုး ဇာတ်ကားကြော်ငြာမဟုတ်ဖူးနော် အဲဒီရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်နေတာကကြာမယ် အခုပြော အခုတတ်ရောပါတဲ့ (korea ကားတွေပါဘူးနော် )
command တွေနဲ့စေခိုင်းရာမှာ သူနားလည်တာကိုဘဲ အမိန့်ပေးစေခိုင်းလို့ရပါတယ်၊ သူနားလည်တာတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲ
အောက်ပုံထဲက အတိုင်းဘဲ ခေါင်းအုန်းကောင်းကောင်းနဲ့ လို့ရနိုင်မယ်
စာအုပ်မြင်ပြီး ဆိုပြီး ဒီpost မပိတ်လိုက်နဲ့အုန်းနော်
စတင်မှု အနေနဲ့ cmd ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
"time" လို့ရိုက် Enter key နှိပ် (" "တွေမပါဘူးနော်) ရပြီနော် ပြန်ဖြေတယ် ဟုတ်
ကျွန်တော်တို့တွေ နဲ့ နေ့စဉ် နဲ့အမျှ များသောအားဖြင့် computer နဲ့ ဘာတွေလုပ်ကြလဲ Q နေ Chat နေတာပေါ့ လို့မဖြေနဲ့နော် တိုင်မှာ လူကြီးတွေနဲ့ con နှေးတာကြောင့် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး လဲမဆိုပါနဲ့နော်
များသောအားဖြင့် သီချင်းလေး ရုပ်ရှင်လေးရှာ ဟိုဖွင့်လိုက်ဒီဖွင့်လိုက် တွေပါပေါ့ တစ်နည်းအားဖြင့် file, folder တွေကို browse ((ဟိုဖွင့်ဒီဖွင့်/ ဟိုလျှောက်ကြည့်ဒီလျှောက်ကြည့် (car ကိုဘာသာပြန်သလိုမျိုးပါ) လုပ်ပါတယ်၊ ကိုယ့် music, words file တွေသိမ်းဖို့ folder တွေဆောက်တယ် file,folder or directory တွေ သိမ်းတယ် ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်တယ် ဟိုဖွက်ဒီဖွက် ဘာလဲမသိ ဟိဟိ ..( စာဖတ်သူ - "တော်တော့ မပြောနဲ့တော့ ကြာရင် "
ဟုတ်ကဲ့ DOS ကလဲ ဒီလို file,folder browse လုပ်တာတွေ copy, move,rename တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ် ထုံးစံအတိုင်း command တစ်ခုချင်းစီ နဲ့ခိုင်းရပါမယ်
"Dir" လက်ရှိမိမိရောက်နေတဲ့ folder or directory or path ထဲမှာ ရှိတဲ့ file,folder or directory တွေကိုကြည့်ချင်ရင်သုံးပါတယ်၊
ပုံအရ cmd စစဖွင့်ခြင်းမှာ ရောက်နေတဲ့နေရာက C:\_Users\_user>_ ဆိုတဲ့နေရာလေးဘဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကို GUI မှာတော့ "windows key + R "နှိပ်
ဒါမှမဟုတ် start >>Computer
ပြီး>>double click on Users
ပြီး>>double click on user
ဒီနေရာမှာ သတိပြုစေလိုတာကတော့ GUI မှာအချိန်ပေးပြီး browse လုပ်ခဲ့ရတာကို cmd or command မှာတန်းဖွင့်ရုံနဲ့ ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်တယ်ကိုပါ..
GUI အားသာချက်ကတော့ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့( မိမိသွားချင်တဲ့folder )ကိုရောက်တာနဲ့ ၎င်း folderမှာရှိနေတဲ့ file တွေ folder တွေ ကို တန်းမြင်ရတာပါ so we called its GUI
Dos မှာတော့ '"dir " ဆိုတဲ့ command ကိုသီးခြားရိုက်ပေးရပါမယ် (စာလုံးအကြီးအသေး ပြဿနာမရှိပါဘူး Dir=dir=DIr=.....)( idr တော့မလုပ်နဲ့နော်
ဆိုတော့ "dir" ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင် တွေ့ပြီပေါ့နော်(command တစ်ခုပေးပြီးတိုင်း Enter ခေါက်ပေး ဖိပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့) (ဒါကဘာနဲ့ တူညီသလဲဆိုတော့ စားသောက်ဆိုင်မှာ မှာစရာရှိတာမှာပြီး "ဟေ့လုပ်တော့ မှာတာဒါဘဲလို့" ဆိုတာနဲ့ တူညီပါတယ်၊ Enter မခေါက်/မဖိရင်တော့ သေချာတယ် မှာသာမှာ၏ ဘာမှမရဘဲ ဖြစ်ပါမယ် ...) သူလေး အဲမှားလို့ file, folder or directory တွေကို
ဒီအတိုင်း သိချင်တဲ့ folder ကို right click properties ဆိုလဲရတာပါဘဲ ချက်ချင်းတော့တွေ့ရဘူးပေါ့.. အလွန်ကြီးမားသောhomework ကြီးကိုဖြေရှင်းပြီးသကာလ ကြတာပေါ့
"dir "နဲ့ကြည့်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ ကျွန့်တော့် file,folder or directory တွေကများတော့ အမြန်ပြသွားတာ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲမတွေ့လိုက်ဖူးခင်ဗျ၊ folder အောက်က sub folder တွေ file တွေပါတစ်ခါတည်းကြည့်ချင်တယ်ဗျာ ကြည့်ရမရှင်းဘူးဗျ စသည်ဖြင့် လိုလားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြမှာ MS-DOS ကသိပြီးသားလေ
အဖြေကလဲရှင်းပါတယ် dir command ကိုထပ်ပေါင်းထည့်ရိုက်ပေါ့တဲ့၊ စပြီလက်ညောင်းဖို့ ဒါကြောင့်လဲ GUI ကိုကြိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
ကို ရိုက်ပြီး command window ထဲမှာပဲ သူ့ကိုဘဲ ပြန်မေးနိုင်ပါတယ်
နဲ့နော်အပေါ်ကလို စာတွေအများကြီးနဲ့ပြန်လာမှာပါ ချစ်သူ့စာဖတ်သလိုလေးဖတ်ပေးပါ လဲနေနဲ့အုန်း
dir ကို switch လို့ခေါ်တဲ့(မီးခုလုပ်မဟုတ်ဖူးနော်) တွေနဲ့တွဲသုံးနိုင်ပါတယ်
"dir/w" ဆိုရင် wide screen ပုံစံနဲ့ပြပေးသွားပြီး /d ဆိုရင် /w နဲ့တော့တူတယ် ဒါပေမည့် file တွေကို colum အလိုက်စီပေးသွားပါတယ်၊ အောက်ပုံကိုကြည့် သို့မိမိဘာသာလဲရိုက်ကြည့်ပေးပါ (command ပြောပါတယ်) မိမိကိုတော့သွားမရိုက်နဲ့နော်
"အမြန်ပြသွားတာ ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲမတွေ့လိုက်ဖူးခင်ဗျ၊" ကိုတော့ /p (page by page or pause) switch သုံးပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်
တစ်မျက်နှာစာ မြင်နိုင်သလောက်ပြမယ်နောက် (မောင့်တစ်မျက်နှာမယ့်တစ်မျက်နှာတွေ ဟုတ်ဖူးနော် )
လိုက်ကြည့်ဖို့လဲမကြိုးစားနဲ့အုန်းနော် "dir /p/s" ဆိုပြီး switch တွေကိုတွဲသုံးခြင်းအားဖြင့် တစ်မျက်နှာချင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ ပြတာတွေကလဲအရှည်ကြီးမဆုံးတော့ဘူး တော်ပါတော့ရပ်ချင်ပါပြီဆိုလဲ "Ctrl +c " control key နဲ့ c key ကို တစ်ပြိုင်တည်းတွဲနှိပ်ပေးပါ ရောက်ရာအရပ်ကရပ်ပါတယ်၊ ချစ်သူခြေများလို့ဆိုပြီး ctrl+c ကြီးလဲဇွတ်ဖိနှိပ်မနေနဲ့အုန်း ရဘူး keyboard သာပေါက်သွားမယ်၊ ဆိုင်ဘူးနော် ပြီး ယတြာတွေလဲချေ မနေနဲ့အုန်း ctrl+c ဖြစ်တဲ့ မေတ္တာသာပွါးပေးပါ( ဗေဒင်ဆရာတွေတော့ စာရေးသူကို လောက်ပြီ)
ဒီနေ့ အနေနဲ့ dir နဲ့ပက်သက်ပြီး switch တွေနဲ့ နပန်းလုံးကြည့်ပါ ထုံးစံအတိုင်း
ဆိုရင်တော format.com file ကိုလက်ရှိ folder or directory ထဲမှာ ရှိမရှိရှာပေးပါမယ်
ဆိုရင်တော့ mp3 သီချင်းတွေကိုရှာပေးသွားမှာပေါ့
dir *.mp3 /s/p
ဆိုရင်တော့ sub folder တွေထဲက mp3 သီချင်းတွေကိုရှာပေးသွားမှာပေါ့
dir m*.mp3 /s/p
ဆိုရင်တော့ sub folder တွေထဲက mနဲ့စတဲ့ mp3 သီချင်းတွေကိုရှာပေးသွားမှာပေါ့
dir m*e.mp3 /s/p
dir m???e.mp3 /s/p
ဆိုရင်ရော?? စမ်းကြည့်တော့နော် "?" ကတော့သူ့နေရာမှာ alphabet တစ်ခုစာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်
command အကြောင်း ဆက်မသွားခင်မှာ file, folder or directory တွေအကြောင်းနဲနဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်
file ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း သတင်းအချက်အလက်စတာတွေ သိမ်းထားတဲ့/ ပါဝင်တဲ့ အရာတစ်ခုပေါ့
command အရ "a.txt"ဆိုတဲ့ text file တစ်ခုကို con (in put console လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ keyboard ) ကနေရိုက်ပေးသမျှကို copy ပွါးလိုက်တယ်ပေါ့၊
"0" byte ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် "copy con a.txt " ပြီးရင် "Enter"တစ်ချက်ဖိ၊ ပြီးရင် "a.txt" ထဲကိုယ်ရေးချင်ရာရေး နောက်ဆုံး အားလုံးရေးပြီးရင် "Ctrl+z" နဲ့ ပြီးကြောင်း ရိုက်ပေးရပါတယ်၊
file ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ command အနေနဲ့
အရ ဘာမှမရှိလို့ မရှိတဲ့ blank ကိုဘဲ ပြန်ပြပေးသွားပါတယ် ရှိရင်ပြမလားဆိုတာတော့ ပြန်စမ်းကြည့်ကြပါနော် (command ပြောပါတယ် )
ဒီအတိုင်း "a.txt" ရိုက် enter ဖိလိုက်ရင်လဲ (" " တွေမပါဘူးနော်) .txt ဖြစ်လို့ window (GUI OS )ကနေ notepad နဲ့ဖွင့်ပြသွားပါတယ်၊ ဒါဆိုမိမိ ဖွင့်ချင်တဲ့ file ကို command ထဲမှာ ၎င်းfile name ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရိုက်ပေးရင် သက်ဆိုင်ရာprogram ကဖွင့်ပေးသွားမယ်ပေါ့၊
.txt .doc .mp3 .wav .dat .dll .pdf စတဲ့ file name တွေရဲ့အဆုံးသတ်မှာ အက္ခရာ သုံးလုံးနဲ့ အဆုံးသတ်ပေး (file extension) တာကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း file အမျိုးအစားခွဲဖို့လွယ်ကူအောင်လို့ပါ၊ .flac ဆိုပြီး လေးလုံးနဲ့ အဆုံးသတ်တာတွေလဲရှိပါတယ် ဒါကလဲ အက္ခရာ သုံးလုံး တွေလှည့်ပါတ်သုံးတာ ကုန်သွားလို့နေမှာပေါ့ 
folder သို့မဟုတ် directory ကတော့ အခန်း သို့မဟုတ် နေရာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်၊ အခန်းဆိုတဲ့အတိုင်း အခန်းထဲမှာ အခန်းရှိနိုင်သလို ၎င်းအခန်းထဲမှာကိုလဲ အခန်းထပ်ပြီးရှိနိုင်ပါတယ်၊ အခန်းတွေထဲမှာ ရှိတဲ့/ရှိနိုင်တဲ့ သိုလှောင်ပစ္စည်းလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ file တွေကိုတော့အပေါ်ကအတိုင်းဆွေးနွေးပြီးပါပြီ
နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် တည်နေရာ လိပ်စာရှိရပါမယ် နာမည်ရှိရပါမယ်
MS-DOS မှာတော့ အခန်းတွေကို C: (C drive or volume လို့ခေါ်ပါတယ် ) D: ( D drive or volume လို့ခေါ်ပါတယ် ) E: တွေအောက်မှာရှိတယ်/အခန်းဖွဲ့ထားတယ် လို့ယူဆပါတယ်၊ C: D: တွေက Hard disk တစ်ခုရဲ့ partition့ အပိုင်းတွေကိုဆိုလိုပါတယ်၊ A: (A: drive) ကိုတော့ MS-DOS က floppy disk drive အနေနဲ့နားလည်ပါတယ်
partition တွေအကြောင်းကို forum ထဲမှာအများကြီးဆွေးနွေးထားတာတွေရှိသလို အစ်ကိုကေဇက် ရေးထားတဲ့ ဒီအောက်က link မှာလဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်
I have some questions since I myself am not familiar with this cmd thingy
1.Can CMD be used like scripting language? if else , loop, function,..?
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ Bayint Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒီ post/thread ကနေ what is file, folder directory တွေအကြောင်းက အစ မသိသေးသော စတင်လေ့လာသူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်
1. MS-DOS ကလွန်ရှေးကျတဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် သူကအလုပ်ဖြစ်ယုံလောက်ပဲနေမှာပါ
batch file programming အနေနဲ့တော့ if else , loop, function, တွေအနေနဲ့ ရေးလို့ရနိုင်ပါတယ်၊ ရေးလဲရေးခဲ့ကြမှာပါ နောက်ပိုင်းအဆင်မပြေလို့ ၎င်း powershell/bash/perl တွေ developed ဖြစ်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်
2. ကိုတော့ ကျွန်တော်အတိအကျမဖြေနိုင်ပါဘူး၊ ကျွန်တော့အတွက်တော့ အကျိုးရှိတယ်လို့ဘဲ ဖြေချင်ပါတယ်
အစ်ကိုအချိန်ရရင်လဲ forum အတွက်အကျိုးရှိမည့် ၎င်း powershell/bash/perl တွေ အကြောင်း ရေးပေးပါအုန်းခင်ဗျ
MS-DOS ရဲ့ powerful ဖြစ်တဲ့ command ကိုပြောပါဆို cd (change directory) ကို ချန်ခဲ့လို့မရပါဘူး၊ computer ရဲ့အသုံးအများ ဆုံးအလုပ်ကလဲ file,folder တွေကို လှန်လှောကြည့်ချင်းဘဲလေ Google ကို ကိုအသုံးပြုပြီး internet ကို browse လုပ်တာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ဘဲ browse လုပ်တာကိုလျှော့ချပေးရင် energy အများကြီး save ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ 
ဒါပေမည့် browsing ကို ဘယ်လိုမှ လျှော့ချလို့ရမယ်မထင်ဘူးခင်ဗျ ..ရှာဖွေချင်းက လူ့သဘာဝနေမှာ...ဟီး ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်ကုန်ပြီ sorry...
MS-DOS ကိုစဖွင့်ဖွင့်ခြင်း directory တစ်ခုသို့folder တစ်ခု သို့အခန်းတစ်ခန်းထဲကို အလိုလိုရောက်နေပြီးသားပါ
အပေါ်ကပုံအရဆို C: ဆိုတဲ့ hard disk partition ထဲက Users ဆိုတဲ့အခန်းထဲက user အခန်းထဲမှာရောက်နေပါတယ်၊ ဒီအခန်းထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ( file တွေနဲ့ folder or directory တွေဘဲရှိမှာပါ) ရှိသေးလဲကြည့်ချင်ရင် ထုံးစံအတိုင်း
"dir" command နဲ့ကြည့်ပေးပါ၊
ပုံထဲကအတိုင်း Desktop,Documents စတဲ့ folder သို့ directory သို့ အခန်းထဲကိုဝင်ချင်ရင်
DOS screen တစ်ခုလုံး မျက်စိနောက်အောင် ရှုပ်လာရင်တော့
screen background အရောင် နဲ့ font အရောင် တွေပြောင်းဖို့ကိုတော့
အပေါ်ပုံထဲကအတိုင်း color ဆိုတဲ့ command နဲ့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းယူနိုင်ပါတယ်
အောက်ကပုံမှာတော့ စစချင်း Desktop ဆိုတဲ့အခန်းကိုရောက်ပါတယ် နောက် သူ့အထက် folder ဖြစ်တဲ့ C:\_Users\_user\_ ကိုရောက်ပါတယ် နောက် Desktop ဆိုတဲ့အခန်းထဲဘဲ ပြန်ဝင်ပါတယ်
ဆိုရင်တော့ လက်ရှိရောက်နေတဲ့ Desktop folder ကနေ Documents (c:\_Users\_user\_Documents) ဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်သွားပါမယ်၊ directory or folder path တွေကို " " တွေကို ကြားထဲထည့်ပေးရတာက
တကယ်လို့ My Documents လိုမျိုး folder or directory name မှာ space ခြားတဲ့ အခါမှာလိုအပ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြစ်မလိုအပ်ပါဘူး
drive ပြောင်းဖို့ကိုတော့ C ဆို
D drive ဆို
ဆိုတဲ့ command ကလဲအသုံးများပါတယ် copy ဖို့အတွက် copy ချင်တဲ့ file (source file )နဲ့ နောက်ဆုံးရလာမည့် file (destination file )ရဲ့ နေရာ နဲ့ နာမည်ကိုသတ်မှတ်ပေးရပါမယ်၊
မူလ file ကို မူလနေရာမှာဘဲ မူလနာမည်နဲ့တော့ copy လုပ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးနော် အဲလိုဆို အောက်ကလိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်၊
D:\_>copy a.txt b.txt
a.txt file ကို b.txt file အဖြစ် လက်ရှိ အခန်း (current directory) အတွင်းမှာဘဲ ကူး/ပွါးခြင်းပါ၊
C: အောက်ကိုကူးသွားပါတယ် ဒီနာမည်နဲ့ပါဘဲ
C: drive မှာရှိတဲ့ Desktop ထဲကိုကူးဖို့ပါ၊ ဒါပေမည့် Desktop မှာလဲ ဒီနာမည်နဲ့ file ကရှိပြီးသားဖြစ်နေတော့ overwrite လုပ်မလားမေးပါတယ်၊
.txt နဲ့ဆုံးတဲ့ file အားလုံးကို ကူးယူခြင်းပါ
a.txt file ကိုဖျက်ခြင်းပါ၊
ဖျက်ပြီးရင်တော့ recycle bin ထဲမှာပြန်ရှာရင်တောင် မတွေ့တော့ပါဘူး၊
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ ကိုယ်ပိုင် Command Prompt (Cmd)ဖြင့် star war ကြည့်ခြင်း။
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ DOS ကနေ ကိုသိတဲ့ virus ကို သတ်ရအောင်
ကိုမျိုးဟန်ထက်ရေးထားတာတွေလဲ ကောင်းပါတယ် ခင်ဗျ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရေးပုံမတူတော့ ဖတ်ရတဲ့သူအတွက်
ရသအမျိုးမျိုးရစေတာပေါ့ နောက်ပြီး ကျွန်တော် ရေးရာမှာ မပါ ခဲ့တဲ့ command တွေလဲပါတာ တွေ့မိတယ်..ဆိုတော့ ဆက်သာရေးဗျာ အားပေးနေပါတယ်
ပို့စ် 1,900 ခုအတွက် 9,441 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုလိုမသိ​သေးသမျှကို စိတ်​ရှည်​လက်​ရှည်​နဲ့ဝိုင်းပြီး​ဖြေ​ပေးသွားတဲ့အတွက်​ မသိ​သေးတဲ့အရာ​တွေအများကြီးကို ​လေ့လာသိရှိခွင့်​ရသွားတဲ့အတွက်​ ​ကျေးဇူးအများကြီးတင်​ပါတယ်​ခင်​ဗျ
String ကိုပြောင်းချင်လို့ပါ Zeiya ဆွေးနွေးချက်များ205-02-2011 03:49 AM